Inona no hambolena aok'izany amin'ny taom-pambolena amin'ny herintaona? Aorian'izany ny kolontsaina azonao anaovana an'io, azonao atao ve ny mamafy voa hafa eo akaikiny, ahoana no ifandraisany amin'ireo zavamaniry hafa? - Zavamaniry mihinana - 2019
Torohevitra momba ny fomba hambolena tongolo lay sy ny zavatra azo ambolena aorian'ny taona manaraka
Ny tongolobe dia zavamaniry miteraka tsy ilaina ho an'ny vatan'olombelona, ​​fa ho an'ny zaridaina ihany koa. Eto izahay dia hiteny aminareo, ary avy eo dia tsy tokony hamboly tongolo lay ianao, inona no azo ambolena eo akaikiny, fomba hahazoana vokatra tsara kokoa sy zavatra maro mahaliana. Ataovy izay hahamendrika anao, satria misy toro-làlana manan-danja eo alohanao, dia holazainay hoe nahoana no zava-dehibe ny manamarika ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny fambolena rehefa maniry, ahoana ny fomba amam-panao miaraka amin'ny voankazo hafa, inona no mety indrindra amin'ny fambolena manaraka ny tongolo lay, mandra-pahoviana ianao no mila miandry alohan'ny fambolena manaraka? mamafy taona maro isan-karazany.
Ahoana ny fampifandraisana amin'ny kolontsaina hafa sy ny legioma hafa miaraka aminy?
Aorian'ny dingana na eo anelanelan'ny vokatra azonao zaraina?
Alaviro ny zavamaniry teo aloha
Azo atao ve ny mamafy amin'ny toerana iray mandritra ny taona maromaro?
Inona no legioma azoko ampiasaina amin'ny taona ho avy?
Inona no ao amin'ilay zaridaina mamafy eo akaikin'ny zaridaina?
Firy fotoana tokony hodianao aorian'ny fijinjana avy ao amin'ilay zaridaina, aorian'izany no nambolena voly hafa?
Nahoana ny fanontaniana mipoitra momba ny fifandraisana amin'ny legioma samihafa, inona no mamafy manaraka?
Zava-dehibe ny misafidy ny mpifanolo-bodirindrina amin'ny tongolo lay, satria ny legioma tsirairay dia mitombo ao anatin'ny fepetra manokana.. Izy io dia mamoaka ny tany sy ny vovo-tany izay mamindra ny aretina sy ny bibikely. Raha misy zavamaniry toy izany eo akaiky, dia tsy ilaina ny mihinana legioma. Ny tany dia mitoetra ho madio sy miaraka amin'ny singa mahasoa.
Raha diso ny maka legioma ary maniry, ohatra, legumes eo akaikin'ny tongolo lay, dia tsy hivoatra fotsiny izy ireo. Misy karazana tongolo lay sy tsaramaso miandry anao, satria ny vokatra tsy mifanentana dia mora kokoa amin'ny aretina.
Any akaikinao afaka manamboatra ovy. Noho ny fungicide izay miafina amin'ny tongolo gasy, dia tsy misy fiantraikany amin'ny legioma eo akaiky eo ny aretina. Ary ny phytoncides dia afaka manakana ny fitomboan'ny bakteria, manimba ny zava-drehetra manodidina azy ireo. Noho izany, ireo zavamaniry tsy misy sakantsakana dia mihinana sy manatanjaka amin'ny tany. Raha ny ovy dia tsy voatery ho voan'ny aretin'ny tazo eo akaikin'ny savoka toy izany.
Afaka mametraka eo anelanelan'ny tsaramaso ny voankazo - trongam-bary, felam-boninkazo, mainty mainty. Noho izany dia mampitahotra ny bibikely madinika izay manimba ny vokatra (lalitra, vitsika).
Asio felam-boninkazo eo anelanelan'ny voninkazo, ary ny bibikely dia tsy manala ravina sy biriky (ohatra, akaikin'ny gladeiolus na tulip, raozy).
Ny felam-boninkazo, ny parsley dia manaisotra ny ravin'akafo, ary ny karôtina avy amin'ny lalitra (carrot), izay misy fiantraikany amin'ny voankazo manontolo. Azo atao ve ny manana voatabia maromaro, kôkômbra sy volkano? Koa satria ny tongolo lay dia mitombo amin'ny toe-javatra mitovy, dia afaka mipetraka koa izy ireo eo akaiky. Araka ny asehon'ny fanao, ny ankamaroan'ny mpamboly dia manamboatra tongolo lay eo anelanelan'ny ravinkazo na ny strawberries.
Amin'ny fampandrosoana azy, ny vokatra rehetra dia mitondra vovo-tsolika avy eto an-tany, ka noho izany dia mandeha indray ny tany, dia ilaina ny mamerina ny fahavokarana. Mampirisika antsika hamboly zavamaniry maro be eny an-tany isika, ary tsy mendrika.
Vonjeo! Ohatra, raha manomana karaoty ianao amin'ity taona ity, amin'ny taona ho avy dia tsara kokoa ny manamboatra voamaina na ovy, satria manampy amin'ny famerenana ny mizana ny singa marindrano.
Ny voankazo dia azo ambolena rehefa vokatra (vary orza sy ovy no tsy miraharaha), manatsara ny kalitaon'ny tany amin'ny lafiny rehetra. Saingy, ny fambolena avy amin'ny zavamaniry (clover, alfalfa, zucchini, sns) dia mety ho safidy tsara ihany koa.
Ny tsara indrindra:
tsaramaso (tsaramaso na farihy);
squash, squash ary pumpkins;
karaoty sy kôlôbôlà.
Tsy tokony hamboly tongolo lay ianao aorian'ny karaoty, satria mandrotsaka ny tany ary mila mamokatra voankazo.
Tsy tokony hamboly tongolo tongolo volo ianao aorian'ny tongolobe, satria manondraka zavatra maro mahasoa.
Ny tongolo sy ny tongolo lay dia mitovy. noho izany Aorian'ny tongolobe dia azo tsaboina ao amin'ny tanin'ny tongolo lay. Tsy maninona koa ny ramanavy sy ny ovy - mety hanindry ny tongolo lay izay tsy mbola nitsimoka an'i Fusarium.
Matetika izy io no mipetraka akaiky. Amin'ny toerana iray dia afaka mitombo tsy maharitra roa taona. Raha mitombo eo amin'ny toerana iray mandritra ny taona maromaro ny tany, dia voakasiky ny nematode ny tongolo. Ny vokatra dia ny fijinjana mahantra, fa tsy ny voa rehetra velona, ​​ny fiarovana ambany amin'ny ririnina. Ankoatr'ilay aretina, ny fisian'ny sira goavam-be ao anaty rano dia manampy ny olana sy ny fitomboan'ny rano. Atsaharo ny fandroana tokony ho 20 andro alohan'ny fijinjana.
Ny fanontaniana voalohany hovaliana dia hoe azo atao ve ny manangana tongolo zato taona manaraka? Ny mpamboly dia manome valiny mazava - tsia.
Raha efa narianao ny tanin'ny tongolo gny ririnina (ary izany no mamatonalina), dia tsara kokoa ny manamboatra volomparasy (parsley, salady, dill), menaka maitso (alfalfa na farihy, ohatra).
Saingy, raha ny tongolo lay, dia voaoty amin'ny faran'ny vanim-potoana. Noho izany, ny fambolena legioma manaraka dia azo atao amin'ny herintaona. Eto dia mitoetra ny tany, noho izany dia misy safidy maromaro kokoa: voatabia, cucumbers, beets na ovy. Afaka manamboatra legioma na zana-trondro koa ianao.
Raha ny an'ny bebodrano, dia ilaina ny mieritreritra fa tsy nambolena nandritra ny herintaona. Ny tongolo lay dia tsy mitaky ny singa maromaro, ka dia mbola manan-karena toy ny hatramin'izay ny tany.
Ny namana tena mifanaraka amin'ny tongolo lay dia ny voankazo.. Mifanampy izy ireo amin'ny fampivoarana sy miady amin'ny aretina isan-karazany sy ny bibikely. Azo atao ny mamboly, trondro ary rindrina. Io zavamaniry io dia manampy azy ireo hamongotra ny tranokely, ny antsibe, ny fibobohan-jazakely, ny kofehy, ny spider sy ny nematode.
Tsy tokony hijanona any amin'ny manodidina ny tazo na lozaka, tsaramaso, voanjo. Ny halaviran'ireny tsaramaso sy tongolo ireny dia tokony farafahakeliny metatra. Na azo atao ny manangona tongolo lay loatra manakaiky ny tongolo lay - tsy tokony hanao izany ao am-pandriana iray.
Rehefa tonga amin'ny tongolo gilasy, dia alaina amin'ny fahavaratra. Aorian'ny fijinjana dia andraso farafahakeliny roa herinandro, aorian'izay dia afaka manamboatra legioma.
Rehefa vita ny tongolo lay, ary efa voajinina amin'ny faran'ny vanim-potoana, dia tsy tokony hioroka amin'ny tany amin'ny zavatra iray ianao. Mila manome azy fitsaharana isika, ary amin'ny fiandohan'ny lohataona dia manangona legioma. Raha mbola te hamboly zavatra ianao mba tsy hisy tsimparifary, dia tsara kokoa ny mamafy volom-borona.
Ny zavatra tena tadidinao dia ny zavatra, alohan'ny zavatra, ary avy eo mamafy ianao. Noho izany, ny taninao dia hitoetra ho vaovao sy manankarena amin'ny singa marindrano mahasoa.
Ny andraikiny amin'ny fahombiazana amin'ny tongolo lay dia ny fambolena voajanahary tsara indrindra. Zava-dehibe ny tsy misafidy ny voa tsara, hanaraka ny daty famolavolana, fa koa mba hahafantarana ny tsiranoka sy ny endriky ny famolavolana ny lohataona sy ny ririnina eny an-tany malalaka. Ao amin'ny tranokalanay dia hahita fanazavana momba ny mety hambolena tongolo gilasy amin'ny lohataona, inona no karazana tongolo lay, ary ahoana no ahafahana mihinana an'io legioma io ao an-trano.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Torohevitra momba ny fomba hambolena tongolo lay sy ny zavatra azo ambolena aorian'ny taona manaraka